Fold Galaxy ayaa lagu iibiyaa Shiinaha ka dib shan daqiiqo markii la iibinayay | Androidsis
Fold Galaxy wuxuu ka mid yahay moodooyinka loogu hadalheynta badan yahay dayrta. Dhowr toddobaad ayaa laga joogaa tan iyo markii taleefankii ugu horreeyay ee Samsung la laabi karo ayaa si rasmi ah looga bilaabay Spain. Soo dhaweynta taleefankan suuqa ku jira ayaa ah mid hagaagsan, iyadoo iibku fiicanyahay, mararka qaarkood xitaa xitaa wuxuu ka sarreeyaa filashada astaanta lafteeda.
Taleefanka ayaa sidoo kale laga bilaabay Shiinaha, waddan ay Samsung lumineysay joogitaankiisa si cad. In kasta oo xaqiiqda ah in soo saaraha Kuuriya ee caan ku ah dalkan uu sii yaraanayo, haddana Galaxy Fold ayaa soo saareysa xiiso. Xaqiiqdii, maalintii ugu horreysay xitaa waa la iibiyay.
Taleefanka ayaa laga bilaabay Shiinaha, dhowr iib oo xadidan. Macaamiisha ayaa runtii xiiseynayay Fold Galaxy, maxaa yeelay shan daqiiqo gudahood ayaa cutubyadii oo dhan lagu daalay moodelkan. Waxaa xaqiijiyay shirkadda Samsung lafteeda qaabkeeda rasmiga ah ee Weibo.
Wax xog ah lama bixin tirada unugyada la iibiyey. Waxa caadiga ah ee ficilada noocan ahi waa inay yaryihiin, laakiin ugu yaraan shirkadda waxay u tahay calaamad wanaagsan, in xitaa suuqyada sida Shiinaha oo kale, oo aanay aad ugu habboonayn, ay dan ka leedahay qalabkan.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, soo saarista Galaxy Fold ee Shiinaha sidoo kale waa wax muhiimad weyn leh. Sida Huawei Mate X ayaa la bilaabay sidoo kale Shiinaha, sidaa darteed waxay ku tartamayaan qaybtan suuqan. Marka joogitaanka Shiinaha ee taleefankan ayaa fure u ah istiraatiijiyaddiisa.
Waa inaan aragnaa sida loo yaqaan 'Galaxy Fold' oo loo iibiyo bilaha soo socda. Shirkada Kuuriya waxay leedahay qorshooyin cad ballaadhi noocyada taleefannada laysku laaban karo oo wata taleefano cusub, oo iibkooda sidoo kale waa inuu si weyn kor ugu kacaa sanadka soo socda, uguyaraan saadaashiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Fold Galaxy wuxuu ku iibiyaa Shiinaha shan daqiiqo gudahood
Hada, waxaan ka imid Samung, waxaan soo saarnay 50 cutub oo ah hirarkii ugu horreeyay, dhammaantood waa la iibiyay! 100% guul! oh oo waxay kaliya soo noqdeen 40 ... ilaa hadda
Iibinta Smartwatch ayaa korodhay 42% rubuca saddexaad
Inaad wadahadal joogto ah la yeelato Kaaliyaha Google way kuu suurtoobaysaa